नेपालमा १५ वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने तयारी
नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ। कूल जनसङ्ख्याको दुई तिहाइभन्दा बढीलाई खोप लगाउँदा त्यसले समुदायस्तरमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको कार्य गर्ने र अन्यलाई लगाउनु नपर्ने हुन्छ।
बालबालिकालाई अहिलेसम्म खोप परीक्षण नगरिएको र उनीहरुबाहेक सबैलाई खोप लगाउने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए।
अहिले बन्न थालेको खोप १५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई मात्र परीक्षण गरिएकाले नेपालमा पनि सोही समूहका व्यक्तिलाई लगाइने छ। नेपालमा १५ वर्षमुनिका २८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको र उनीहरुलाई खोप लगाइने छैन। बालबालिकाभन्दा माथिका उमेर समूहमा परीक्षण भएर सफल भएपछि तिनलाई पनि खोप लगाइने उनले जानकारी दिए।
सरकारले पहिलो चरणमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने भएको छ। मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स ‘गाभी’ र ‘सेपी’ नामक तीन सङ्गठनको ‘कोभ्याक्स सुविधा’ नामक संयन्त्रअन्तर्गत निःशुल्क खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। ‘कोभ्याक्स सुविधा’ ले गरीब र कम आय भएका मुलुकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भएको छ।
कोभिड-१९ खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा श्यामराज उप्रेतीले कोभ्याक्समार्फत ल्याइने खोपका लागि यही मङ्सिर १९ गते कूटनीतिकपत्र पठाइसकिएको जानकारी दिए।
पहिलो चरणमा आउने २० प्रतिशतमध्ये शुरुमा तीन प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धवृद्धालाई दिइनेछ। सरकारले बाँकी ५२ प्रतिशत खोप कूटनीतिक नियोगबाट सरकार–सरकार (जिटुजी) सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार र ठेक्कामार्फत ल्याउने छ। उनका अनुसार सरकारले रु ४८ अर्ब खोप ल्याउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
अहिले फाइजर एण्ड बायोएनटेक, मोडेर्ना (अमेरिका), अक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका (बेलायत), ‘स्पुतनिक-भी’ र ग्यामेलिया (रुस) र ‘साइनोभ्याक्स’ (चीन) का खोप अहिले अन्तिम परीक्षणमा छन्। तीमध्ये फाइजर कम्पनीको खोप सफल परीक्षण भई विश्व वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले भर्खरै मान्यता प्रदान गरेको छ।
नेपालका लागि अक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेकाले बनाएको खोप उपयुक्त रहेको देखिएको छ। फाइजरको माइनस ८० डिग्री सेल्सियस तापक्रम र मोडेर्नाले बनाएको खोप माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। उक्त दुवै खोप नेपालका लागि उपयुक्त नभएको विज्ञको भनाइ छ।
अहिले अन्तिम परीक्षणका रुपमा रहेका अक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेकाले बनाएको खोप दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियसमा राख्न सकिने भएकाले उपयुक्त हुने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले बताए। “हाम्रो यहाँ निकै कम तापक्रममा खोप राख्न सम्भव हुँदैन”, उनले भने, “त्यसैले यहाँको वातावरणअनुसार कम तापक्रममा रहने खोप नै उपयुक्त हुन्छ।”
निकै कम तापक्रममा राख्न मिल्ने खोप केही अस्पतालसँग मात्र राख्न सक्ने क्षमता रहेको उनले बताए।
खोप ल्याउने तयारी गरिएपछि मन्त्रालयले खोप भण्डारण क्षमता बढाउन थालेको छ। खोप भण्डारण व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापकलाई अभिमुखीकरण तालीमसमेत दिइसकिएको छ। डा. उप्रेतीले खोप ल्याउने तयारी द्रुतगतिमा भइरहेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७७ १५:१८ बिहीबार
काठमाण्डाै - सरकारले आजदेखि ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप नि:शुल्क लगाउँदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दोस्रो चरणअन्तर्गत ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने भएकाे हाे । खोपको उपलब्धता र जोखिमको आधारमा आजदेखि ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ज...
कोभिड-१९ खोप 'कसले लगाउन हुन्छ, कसले लगाउन हुँदैन?' - BBC News नेपाली
नेपालमा सरकारले फागुन २३ गतेदेखि ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई पनि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिने तयारी गरिरहेको छ। तर बढी उमेर भएका र कुनै किसिमको रोगको औषधि प्रयोग गरिरहेका मानिसले खोप लगाउन मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा भने धेरैमा संशय देखिन्छ।
बीबीसी नेपाली 13 दिन पहिले
खोप अभियानअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला वृद्धवृद्धा र अग्रपङ्तिमा खटिएकाहरुलाई खोप लगाइने भएको छ। उनले एक वर्षभरी एक/एक महिनाको अवधिमा खोप ल्याइने पनि जानकारी दिए। खोप देशव्यापी रुपमा सबै नागरिकलाई लगाइ दिने योजना बनाइएको पनि उनले बताए।
पालको कूल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ । कूल जनसङ्ख्याको दुई तिहाइभन्दा बढीलाई खोप लगाउँदा त्यसले समुदायस्तरमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको कार्य गर्ने र अन्यलाई लगाउनु नपर्ने हुन्छ । बालबालिकालाई अहिलेसम्म खोप परीक्षण नगरिएको र उनीहरुबाहेक सबैलाई खोप लगाउने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अहिले बन्न थालेको खोप १५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई मात्र परीक्षण गरिएकाले नेपालमा पनि सोही समूहका व्यक्तिलाई लगाइने छ । नेपालमा १५ वर्षमुनिका २८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको र उनीहरुलाई खोप लगाइने छैन । उहाँले बालबालिकाभन्दा माथिका उमेर समूहमा परीक्षण भएर सफल भएपछि तिनलाई पनि खोप लगाइने जानकारी दिनुभयो ।
लकडाउनमा बालबालिकालाई नियमित खोप सेवा
सल्यान : कोरोना भाइरसको सम्भावित सत्रंmमणबाट बच्न लगाइएको लकडाउन कारण खोपबाट बञ्चित एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। एक वर्ष पुग्गासम्म मासिक रुपमा नियमित ११ वटा खोप लगाउनु पर्दछ। तर, लकडाउनले गर्दा बालबालिकाहरु खोप लगाउने समयतालिका सरेको थियो। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका खोप अधिकृत...
निको भएर घर फर्किइन् पूर्व मुमाबडामहारानी
९१ वर्षकी रत्न एक सातायता बिरामी थिइन्। नारायणहिटी दरबारभित्रैको महेन्द्र मन्जिलमा एक्लै बसिरहेकी रत्नलाई सहयोगीहरूले नर्भिकमा लगेका थिए।
नेपालमा ‘लगानी भोक’ नै जागेको देखिएन
लगानी सम्मेलनका लागि अझ बढी तयारी गर्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै सम्मेलन गरेर लगानी ओइरियो भने अर्को ३-४ वर्षमा नतिजाहरु पनि देखिनसक्छ भन्ने मनशाय पनि हुन सक्छ …
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित दोस्रो एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय इनर्जी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले नेपालमा स्थायित्व र विकासको युग सुरू भएको भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले विगतको तुलनामा ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी…